Navoaka ny Blender 2.65 | Avy amin'ny Linux
Nafahana Blender 2.65
Tamin'ny 10 Desambra, navotsotra ny Blender Foundation sy ny vondrom-piarahamonin'ny developer Blender 2.65. Tamin'ity indray mitoraka ity dia nifantoka tamin'ny fanaovana ny kinova azo antoka kokoa amin'ny tsingerina 2.6x. Namboarina manodidina izy ireo Bibikely 200.
Nampiana Fanahafana ny afo miaraka amin'ny fanatsarana maro ny simulateur setroka. Ho an'ny Cycle Render nampiana izany fihetsiketsehana toy izany koa alokaloka anisotropika. Etsy ankilany, ny fanovana Decimate dia nahazo fanovana. Ho an'ny modelin'ny harato, ny nohatsaraina be ny chamfering. Anisan'ireo fanampiana vaovao ny a symmetrization fitaovana harato, karazana fanalefahana hafa antsoina hoe Laplacian ary ny Fanovana triangular.
1 Afo sy setroka:
2 Cycle Render:
3 Modely amin'ny harato:
Afo sy setroka:
Izao dia efa fanahafana afo. Ny safidy mankany amin'ny zavatra domain nahazo fanavaozana lehibe ho an'ny manatsara ny fahombiazana sy ny fampiasana. Tsy toy ny taloha, ny setroka azo avoaka amin'ny tontolon'ny harato tsy mila rafitra sombiny. Mba hanatsarana ny fifaneraserana amin'ireo simika hafa, a sahan-kery ho an'ny fikorianan'ny setroka. Ny mety ny mamorona setroka setroka miloko ary koa ny safidy fampifangaroana. Ankoatr'izay, ny nihatsara ny fifandraisan'ny setroka amin'ny zavatra fifandonana.
Amin'io lafiny io dia nomena fanampiana ny manoratra shaders manokana amin'ny fiteny Open Shading. Nampiana tamin'ny Fandikana ny Motion Blur na tsy mazava ny fihetsehana, manjary manjavozavo ny zavatra mihetsika. Misy koa a teboka famonoana anisotropika, ary ny Ny node BSDF dia mety manana fomba mahazatra hafa, izay azo apetraka amin'ny alalàn'ny node vaovao ho an'ny bonbony sy ny sarintany mahazatra.
Modely amin'ny harato:
Anisan'izany ny fitaovana bezel boribory, mitahiry milamina kokoa ny sakan'ny vorombola nangataka sy hiteraka topolojia tsaratsara kokoa ary koa fitaovana iray hamoronana symmetry amin'ny topology mesh.
El Ny mpanova decimator dia naverina nosoratana ary izao mitahiry ny angona UV sy ny loko vertex; manana safidy ho an'ny ialao ny fizarazarana ary fomba iray mamaha ny tampon mba hamoronana fiaramanidina n-gons. ny fanovana fanitsiana Laplacian vaovao mba hampihenana ny tabataba na hampandeha ny harato rehefa mitahiry ny sisiny sy ny volan'ny zavatra. ny Triangulate modifier, izay mety ho ilaina amin'ny famoronana fananana lalao amin'ny alàlan'ny fanaingoana ireo sarintany mahazatra.
Ity ny rohy mankany amin'ny faritra fisintomana blender:
Pejy fampidinana blender
Ny mpanoratra an'ity lahatsoratra ity dia Mario Marrero Leyva, entina avy amin'ny fiarahamonina olona an'ny intranet an'i Cuba 🙂
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Nafahana Blender 2.65
Iray amin'ireo programa fampiasako isan'andro, tena manana fampandrosoana miavaka izy io.
Hang1 dia hoy izy:
Tena tsara io. Matetika mampiasa ny kinova 2.49b aho.
Mampalahelo fa mahatsiravina ireo kinova vaovao, feno bokotra na aiza na aiza. Ary saika tsy azo ampiasaina amin'ny efijery kely.
Valio amin'i Colga1
Mampiseho izany fa fantatrao ny terminolojia 😉
Inona ny fandikana ny afo, ny setroka ary ny rano mandany processeur betsaka, noho izany dia mila manandrana ny fanatsarana ny setroka entin'ity kinova ity ianao.
Jokte 100% safidy hafa maimaim-poana amin'i Joomla
Web Format Font Format (WOFF) lasa fenitra